Daawo:- Farxadda ka muuqata Deni iyo CCWarsame kulankii Garowe + CCW oo kajawaabay sababtii uu u khudbeyn waayay.
January 31, 2019 marqaan 15
Siyaasisiga saamaynta badan leh ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta qasriga madaxtooyada Puntland ee Garoowe kula kulmay madaxwaynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdillaahi Deni. Labada Masuul oo ay ka muuqato farxad badan ayaa saxaafadda kasoo hor
Daawo:- Somaliland oo caburin ku bilaawday Macalimiinta Iskuulada “Waa xarig macalinkii mudaharaad sameeya”.
January 31, 2019 marqaan 1
Maamulka Somaliland oo mudooyinkii ugu dambeeyay caburin isdaba joog ah ku hayay bulshada somaliland qaybaheeda kala duwan ayaa hadda caburinta dadka lagu hayo ku daray macalimiinta wax ka dhiga iskuulada somaliland. Wasaaradda Waxbarashada ayaa sheegtay
Daawo:- Xukuumadda Somalia oo ku dhawaaqday tirada saxda ee Somalida Barakaca iyo qaxootiga ah.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Soomaaliya, mudane, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa Maanta daah-furay shirka waaxda xal u helidda barakacayaasha Gobolka Banaadir. Kulanka oo looga hadlayay sidii xal buuxa looga gaari lahaa dhammaan dhibaatooyinka calaamadda
Dhagayso:- Madaxwayne Deni iyo CCWarsame oo kulan aan la filayn ku qaatay madaxtooyada Garoowe “maxay kawada hadleen?”.
January 31, 2019 marqaan 6
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta Madaxtooyada Garowe ku qaabiley siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Kulanka ay qaateen labada masuul ayaa daarnaa salaan iyo is xog wareysi guud ee xaaladda dalka iyo sidii dalka loo
Dhagayso+Sawiro:- Madaxwayne Deni oo safiiradii ugu badnaa ku qaabilay Garoowe.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ku qaabilay Safiirada Dalalka Imaaraadka Carabta, Sweden, UK, Germany, Qadar, Suudaan, Masar, iyo safiirka Midowga Yurub. Kulamada uu madaxweynaha Puntland la qaatay
Warbixin+Sawiro:- Ajnabigii lagu xiray Muqdisho oo la ogaaday inuu ahaa basaas u shaqeeya SKA iyo UAE.
Dowlada UK ayaa walaac ka muujineysa xaalada ninka u dhashay dalkaasi Hardman Cox oo 19kii bishan lagu qabtay Madaarka Muqdisho, isagoo la sheegay inuu sitay waxyaabaha qarxa oo uu doonayey inuu la raaco diyaarada Ethiopian
Dhagayso:- Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Tukarraq iyo weji cusub oo uu yeeshay.
January 31, 2019 marqaan 0
Wararka aan ka heleyno deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi dagaal uu ku dhexmaray Ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland. Dagaalkaasi ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhacay deegaan
DAAWO:- Boqor Burhaan oo aan ka qayb gelin Caleemasaarkii Deni oo qardho wafdi kuqaabilay.
Boqor Burhaan boqr Muuse oo ah boqorka guud ee beelaha daarood ayaanan ka qayb galin xafladii caleema saarka madaxda cusub ee Puntland waxayna dad badan is waydiinayaan sababta uu uga qayb geli waayay boqorka xafladaasi.
Xasan Sheekh Maxamud oo Farmaajo ku Eedeyey Musuq Maasuq.
January 31, 2019 marqaan 5
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD) ee hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada London 7 Febraayo 2019, kaas oo ay soo qaban-qaabisay Wasaaradda
SIR LA HELAY:Hadal hayanta Garoowe Asad Diyaano oo Wasiirka Amniga loo Magacabayo
Xuuraansiga Hadal hayanta Ugu badan ee Taagan Garoowe Wararka La Xirirka Magacabida Golaha wasiirada Puntland Ayaa Dadku Si kala Duwan U Hadal hayaan. Warka Ugu hadal hayanta Badan Garoowe Ayaa Ah Inuu Xukumada Cusub Madaxweynaha
WAR XAASAASI AH:Madaxweyne Siciid Cabdulahi Deni oo Wasiiradiisa U Badinaya Musharaxinti la Tartamayey Kulamo Ugu danbeeyey
January 31, 2019 marqaan 2
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulahi Deni Ayaa Bilaabay Kulamo kala Duwan oo uu saacadaha Ugu Danbeeyey uu Madaxtooyada Ku Qaabilayey Siyaasin Iyo Madax Dhaqameedka Kala Duwan. Sida Ilo Goob Joog Ah U Sheegayaan Marqaan News Waxaa
DAAWO VIDEO:Ergo Dhex Dhexaadinaysa Soomaaliya Iyo QM oo Farmaajo La Kulmay Shuruud Ku Xiray
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso u qaabbilsanaha Arrimaha Siyaasadda iyo Nabadeynta ee Xafiiska Xoghaya Qaramada Midoobey Marwo Rosemary A. DiCarlo, isaga oo QM uga mahadceliyey
War Ka Soo Cusboonaaday Maxkamadaynti Madaxweynahi Hore ee DDSI cabdi Maxamud Cumar.
January 31, 2019 marqaan 3
Madaxweynihi hore ee DDSI Cabsi Maxamud Cumar aya Manta markale Maxkamad laso taagay iyadoona Xeer ilaalinta Ethopia ayaa sheegtay in 47 Qof oo uu kamid yahay Madaxweynihi hore ay ku lug lahaayen Dhacdadii 4ti Augosto
DAAWO VIDEO:Xildhibaan Dhulbahante oo ku Dhaartay Inuu Hargeysa Ku Garaacayo Faysal Cali Waraabe
Xildhibaan Nuuridiin oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Laascaanood ayaa si cadho leh uga jawaabay hadal kasoo yeedhay Gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, isaga oo ku tilmaamay ruux ka shaqeeya dhibaateynta iyo kala
Daawo:- Kheyre “UN-ka naguma qasbi karaan waxaan anagu rabin waana la xaliyay khilaafkii jiray”..
January 30, 2019 marqaan 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadda qaramada midoobay (DPPA), Rosemary DiCarlo oo Muqdisho safar kusoo gaartay. Kulanka ayaa looga hadlay adkaynta
Daawo:- Xildhibaan Dhulbahante ah oo wacad ku maray in Feysal waraabe uu ku dhex garaaci doono Hargaysa.
January 30, 2019 marqaan 1
Daawo:- R/Wsaare Xigeenka oo kabaha la dulmaray mucaaradka “Siyaasiyiinta Xanaaqsan indhaha miyay la’yihiin?”.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuled (Khadar) ayaa si kulul u weeraray Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda,kuwaas oo mararka qaar dhaliila Siyaasada dowladda. Waxa uu sheegay inay jiraan Siyaasiyiin farabadan oo xanaaqsan oo
Daawo:- Cagjar oo qaab cajiib ah ku xakameeyay rabashadihii Jigjiga “Haraadiga CMC ayaa qaska wada”.
Saacidihii lasoo dhaafay waxaa daganayd xaaladda guud ee magaalada Jigjiga kadib markii xalay uu dhaqan galay bandow ay soo rogeen laamaha amaanka, waxaana laga hortagay sii socoshada rabshadahaasi. saraakiil katirsan laamaha amaanka oo xalay kulan
DAAWO:- Somaliland oo xadhig kula kacday caruur Derbi-jiif ah oo xuquuq raadis ahaa + Wadani oo kahadlay.
January 30, 2019 marqaan 3
Xisbiga Mucaaradka Somaliland ee Wadani ayaa cambaareeyay Xarig Ciidamada Somaliland ay kula kaceen Caruur Derbi jiif ah kuwaasi oo la xiray kadib markii ay tageen xafiiska wasaaradda shaqada iyo Shaqaalaha Somaliland iyagoo usocday cabsho ay
Daawo:- Axmed Madoobe oo shuruudo adag ku xiray ka qayb galka shirkii uu ku baaqay Deni.
Madaxwaynaha Maamulka Jubbalan Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” oo kahadlayay shirirkii ka dhacay magaalada Garoowe iyo shirwaynaha lagu balamay in bisha 3aad ee sanadkaan la isugu yimaado ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar uyahay xiriir